IWCA အနာဂတ်ခေါင်းဆောင်ဆုများ - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာရေးခြင်းစင်တာများအသင်း
လျှောက်လွှာများအတွက် ခေါ်ဆိုမှု- 2022 IWCA Future Leader Scholarship Awards
International Writing Centers Association (IWCA) သည် စာရေးစင်တာအသိုင်းအဝိုင်းမှ ကျောင်းသားအဖွဲ့ဝင်များအား ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အခွင့်အလမ်းများ ပေးအပ်ရန်နှင့် ဘွဲ့ကြိုနှင့် ဘွဲ့လွန်အဆင့်တွင် အတန်းတူကျူရှင်ဆရာများနှင့်/သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲသူများကို အသိအမှတ်ပြုရန် ကတိပြုပါသည်။
IWCA Future Leaders Scholarship သည် အနာဂတ်စာရေးစင်တာခေါင်းဆောင်လေးဦးအား ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆုံး ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားတစ်ဦးနှင့် ဘွဲ့ရကျောင်းသားတစ်ဦးကို အသိအမှတ်ပြုခံရမည်ဖြစ်သည်။
ဤပညာသင်ဆုရရှိသောလျှောက်ထားသူများသည် $250 ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ် IWCA ညီလာခံအတွင်း IWCA ခေါင်းဆောင်များနှင့် နေ့လည်စာ သို့မဟုတ် ညစာတက်ရောက်ရန် ဖိတ်ကြားခံရမည်ဖြစ်သည်။
လျှောက်ထားရန်၊ သင်သည် IWCA အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး စာရေးဌာနများနှင့် သင်၏ရေတိုရေရှည်ရည်မှန်းချက်များကို အနာဂတ်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖြစ် စာရေးဌာနနယ်ပယ်တွင် သင်စိတ်ဝင်စားသည့်အကြောင်း ဆွေးနွေးထားသော စကားလုံး 500-700 ၏ ရေးသားဖော်ပြချက်တစ်စောင်ကို တင်သွင်းပါ။ သင်၏လျှောက်လွှာကိုပေးပို့ပါ။ ဒီဂူဂဲလ်ပုံစံ.
သင့်ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဆွေးနွေးမှုများ ပါဝင်နိုင်သည်-
အနာဂတ်ပညာရေး သို့မဟုတ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအစီအစဉ်များ
သင့်စာရေးဌာနသို့ သင်ပံ့ပိုးပေးခဲ့သော နည်းလမ်းများ
သင့်စာရေးဌာနအလုပ်တွင် သင်တီထွင်ဖန်တီးလိုသော သို့မဟုတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လိုသောနည်းလမ်းများ
စာရေးဆရာများနှင့်/သို့မဟုတ် သင့်အသိုင်းအဝိုင်းအပေါ် သင်အကျိုးသက်ရောက်မှု
လျှောက်ထားသူသည် ၎င်းတို့၏ တိကျသော၊ အသေးစိတ် ရေတိုရည်မှန်းချက်များကို မည်မျှ ကောင်းမွန်စွာ တိကျစွာ ထုတ်ဖော်ပြသမည်နည်း။
လျှောက်ထားသူသည် ၎င်းတို့၏ တိကျသေချာသော၊ အသေးစိတ်ရေရှည်ပန်းတိုင်များကို မည်မျှကောင်းမွန်စွာ အတိအကျဖော်ပြသနည်း။
စာရေးစင်တာနယ်ပယ်တွင် အနာဂတ်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်လာရန် သူတို့၏အလားအလာ။
ကျေးဇူးပြု၍ မေးခွန်းများ (သို့မဟုတ် Google ဖောင်ကို ဝင်ခွင့်မရသူများထံမှ အက်ပ်လီကေးရှင်းများ) သို့ IWCA ဆုပေးပွဲ ပူးတွဲဥက္ကဌ Leigh Elion (lelion@emory.edu) နှင့် Rachel Azima (razima2@unl.edu).
လျှောက်လွှာများကို ဇွန်လ 1 ရက်၊ 2022 တွင် ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။
Tetyana (Tanya) Bychkovska၊ Northern Arizona တက္ကသိုလ်
Emily Dux Speltz၊ အိုင်အိုဝါပြည်နယ်တက္ကသိုလ်
Valentina Romero၊ Bunker Hill Community College
Meara Waxman၊ Wake Forest တက္ကသိုလ်